I-Recipe Amafutha Ephuzi
Indlu yasekhaya Ukupheka Okunye Izithako Izinongo namafutha I-garlic
I-pizza ibhande elimnandi Abathandi bendawo yokudlela yase-Italy bavame ukujabulela izitsha zase-Italy ezinomusa, ezinomusa nezomlomo kuphela, kodwa futhi namafutha anamakha ahanjiswa e-pizza noma e-pasta. Ngesinye isikhathi bahlamba ama-garlic clove, i-pepper encane nama-herbs aphunga. Kodwa, uma abantu abaningi belungiselela i-pizza manje ekhaya, khona-ke indlela yokuzimela ngokuzimelela njengamafutha anambithekayo futhi anamakha amafutha, azi konke. Sifuna ukukusiza uphinde ushicilele iresiphi yamafutha acacile ayoguqula ukunambitheka kwanoma yisiphi isidlo kuze kube kuhle kakhulu. I-iresiphi ilula kakhulu, efuna amakhono ngokuphelele nolwazi, ukubekezela kuphela. Ngaphezu kwalokho, lawo mafutha ashisayo azoshisa ngokumnandi ukunambitheka kwezitsha zakho, futhi iyasiza empilweni, ngoba inqubo yokumnika isikhumba ithola inqwaba ye-microelements namavithamini. Amafutha ethu, isibonelo, anesenzo sokubulala i-anthelmintic ne-antimicrobial, ethuthukisa ukujikeleza kwegazi nokugaya, ngoba kufakwa ngegalikhi kanye ne-pepper eshisayo. Ungakwazi futhi ukulungiselela ibhotela lakho ngokubeka ezinye amakhambi nezinongo kulo. Isibonelo, ukunambitheka okungavamile kakhulu nokunambitheka okunamnandi kwamafutha omnqumo kuyonikeza i-rosemary noma i-sage, okungaphezu kwalokho, ukunakekela impilo yakho yesifazane.
Amafutha omnqumo 250 ml
I-Pepper enephukile 1 pc.
Oregano eyomile 2 tsp.
Isinyathelo 1 Ukwenza amafutha aphuze, uthathe amafutha omnqumo, uphethi oshisayo, i-clove enkulu yegalikhi kanye ne-oregano omisiwe (oregano).
Isinyathelo sesi-2 Esigodini esihlanzekile, esomile esingavaliwe ngokuqinile, uthele emafutheni omnqumo bese ufaka ugarlic, i-oregano kanye nepelepele. I-pod ye-pepper eshisayo i-pre-punctured ukuze ingafaki.
Isinyathelo 3 Vala ibhodlela ngokuqinile bese ulibeka endaweni emnyama, ubambe izinsuku ezingu-7-10 ekamelweni lokushisa. Shake amafutha nsuku zonke. Amafutha aqediwe kufanele agcinwe ngokuqinile evaliwe endaweni epholile.
Amazambane ngenyama enamanzi e-multivark
ULecho we-pepper waseBulgaria
Izinkukhu zezinkukhu ezinama-apula
Indlela yokwenza indlu ye-gingerbread
Izinduku zezinkuni eziboshiwe
Inyanga yesibili yokuphila kwengane
Isaladi nge-mackerel esebhekile nommbila
Mangakhi amakhilogremu ashiswa ngenkathi ekhwela?
Indlela yokugwema ukungqubuzana emndenini kanye nabangani
U-Anna Mathison noSergei Bezrukov baba abazali, isithombe sokuqala